प्रिन्ट संस्करण - र्‍याग गर्‍यौ कि ? - कोपिला - कान्तिपुर समाचार
कार्तिक १९, २०७४-के तिमी कसैलाई जिस्काउने वा गिज्याउने गर्छौ ? गर्छौ भने यो बानी सुधारिहाल । यस्तो गर्दा गिज्याउनेलाई एकैछिन मनोरञ्जन त हुन्छ, तर जसलाई जिस्क्याइएको हो ऊ अत्यन्तै दु:खी र हिनताबोधको सिकार हुन पुग्छ । व्यक्तिगत रमाइलोका लागि गरिने यो कार्यले पीडितमा नराकात्मक प्रभाव पार्ने गर्छ । ठटयौलो पारामा ठूलाबाट सानाका लागि गरिने यी कार्य शैक्षिक संस्थाहरूमा नराम्रो तरिकाले फस्टाउँदै गएको छ । विद्यालयहरूमा सिनियरले जुनियरलाई गिज्याउने वा मजाक गर्ने घटनाले दु:खद मोड लिएकोबारे समयसमयमा हामीले सुन्ने गरेकै छौं ।